ukuhlinzwa bariatric iye yasiza iziguli eziningi okhuluphele ukuze siphinde sithole isimo sabo sangaphambili. Abacwaningi yathola ukuthi abesifazane ababeye wahlinzwa zabhekana for esiswini ukuhlinzwa dlula, ungase ube ingozi ephansi yokuthola izifo eziphathelene nenhliziyo, uma kuqhathaniswa neziguli besilisa.
Ukukhuluphala kuyinkinga enkulu
Esifundweni ke yaphazanyiswa emlandweni wezifo ezingaphezu kuka iziguli 2000 isengozini enkulu yesifo senhliziyo. Ososayensi elibukhali impilo isiguli ngesikhathi iminyaka engu-10 ngaphambi kokungenela bariatric, bese kwathi phakathi nomnyaka ngemva kokuhlinzwa. Imiphumela cwaningo ngezinga elithile bakhuthazwa iqembu lochwepheshe, futhi ngezinga elithile kwaholela ukudideka. Zonke iziguli ezine-yabonisa ukuncipha eziphawulekayo isisindo, okuyinto ngokuzenzakalelayo eyabangela ukuncipha okukhulu wegazi. Kodwa uma sicabangela Imiphumela ngobulili, lapha ke yembula iphutha sobala. Abesifazane babe inzuzo ahlukile. I ingozi yesifo senhliziyo eqenjini iziguli kwehle ngo-41 amaphesenti, okuyinto engcono kakhulu amaphesenti 20 kunabantu.
Okuhle inhliziyo impilo - kuyimbangela eyinhloko kade. Akusiyo imfihlo ukuthi abesifazane kufanele bangabi ingxenye enkulu bukhoma eside. Futhi manje ososayensi baye bathola ukuthi inkathi nasezinkingeni ezilandela ngemva kokuhlinzwa Zithwala kalula. Phakathi kweziguli othola bariotricheskoe kokungenela, kukhona ecacile nokungalingani ngokobulili uma kuziwa ekunciphiseni ingozi yesifo senhliziyo. Lokhu kungaba mhlawumbe zingachazwa ngezinqubo yokuthi abesifazane babe indlela sangempela zokuphendula dlula esiswini noma gastroplasty. Lokhu kuholela i ukuzinza ekuseni yezici kwamakhemikhali okubangela senhliziyo nezinye izifo.
Lolu cwaningo lwathola ukuthi amadoda nabesifazane banganika tiphakamiso letehlukile ukuhlinzwa bariatric. Qaphela ukuthi izifo zenhliziyo bayaqhubeka bephethe endaweni yokuqala ohlwini izimbangela eyinhloko yokufa emazweni amaningi athuthukile. Futhi ukukhuluphala ingenye ezinkulu eliguqulekayo engcupheni yesifo senhliziyo.
Ixoxo ingcula amaxoxo - Beauty Eziyingozi
Kubi igazi ekunqandeni.
"Artelak Splash" - ngeso lehla: imfundo analogue